SJSZ65 PVC extrusion guddi saqafka mashiinka - Shiinaha Qingdao Suke Makiinado
Saqafkii PVC Panel Extrusion Machine -Suke Makiinado
shirkadda Our waa iskaashi la jaamacadaha badan si ay u horumariyaan mishiinka degdeg loogu baahan yahay caag ah. Waxaa sidoo kale nuuga technology sare ka dibadda si loo gaaro ujeedada qeybinayay mashiinka dhamaystiran iyo technology.
Saqafka PVC la sameeyey by PVC oo lagu daro qaar ka mid ah. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in decoration jikada iyo musqusha. Waxay leedahay sifooyinka ah oo miisaankeedu yahay iftiinka, qoyaan-caddayn, ningax kulaylka iyo ma fududa in dab, ciidda u nuugo, laakiin ay fududahay in rinjiga, rakibi.
1. Ku marooji Quudinta Machine
2. SJSZ 51 × 105 Twin Ku marooji Extruder
3. Extrusion Qaab
4. qaabaynta Machine
5. Machine Shixnad-off
6. Machine Jarida
Machine darran waayo Xulashada
1. SWP360 Xudhama
2. 200/500 fiicni
Waxaa la baaro marar badan, sidaa darteed waxa uu leeyahay faa'iidooyinka badbaadinayo tamarta iyo qalab, iyo kordhinta tayada iyo faa'iido by dhaqmaadka technology sare. Shayga of mishiinka saqafka PVC waa siman, qurux badan, oo aan lahayn ur dhibaato, waxa ka soo hadhay ma fududa in ay ka soo qaab.
Waxaa jira astaamo badan oo saqafka PVC ah, sida ku cad assortments caanno, midabka cream, buluug acid, iyo nidaamyada ubax, parquet, baasaboorka iyo miro guduud. Dabcan, astaamaha iyo midabada saqafka PVC waxaa lagu sameeyey si waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
PVC saqafka, guddi PVC, derbiga PVC guddi
Light ee miisaanka iyo rakibidda fudud
5.8 / 5.95m / shuruudaha macaamiisha '
Daabacaadda, kulul-Gurdanka, daabacaadda pearlite, xuubka hoose, caadi dhalaalaya dhalaalaya, sare
midabada kala duwan in aad doorato
(1) dusha ihin High, oo siman oo aan farqi marka concatenated
(2) sidad, qoyaan-caddayn, caaryada-caddayn, biyuhu, soundproof, dhawaaqa-qaadashada, iftiinka iyo miisaamidda iyo rakibidda fudud
(3) Waayo, saqafka iyo derbiga decoration
(4) Kala duwan ee midabada iyo qaababka
dusha Flat ama jeexdin dhexe
Previous: SJSZ51 PVC guddi saqafka mashiinka extrusion
Next: SJSZ80 PVC guddi saqafka mashiinka extrusion
Bowd PCV Machine Extrusion Profile
PCV Profile marmar Extruder
PCV Profile marmar Extrusion Line
PCV marmar Machine Profile
PCV caaga Extrusion Profile Machine
SJSZ65 PVC derbiga decoration mashiinka extrusion guddiga
SJSZ80 PVC derbiga decoration mashiinka extrusion guddiga
SJSZ55 PVC derbiga decoration mashiinka extrusion guddiga